ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - Fet အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ & Technology မှ Co. , Ltd
Compressed Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့
အရောင် Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့
ပြည်ထဲရေး Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့
ပြင်ပ Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့
ကယ်လ်ဆီယမ် silicates ဘုတ်အဖွဲ့
Diatomite ဗာ Mat
ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေပြင်ပ Panel များ
ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေ side Panel များ
အခုတော့ Fiber ဘိလပ်မြေအမှတ်တရဘုတ်အဖွဲ့ & Compressed Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ရယူပါ!
တစ်ဦးက Quote တောင်းဆိုမှုများရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အဓိကစျေးကွက် အခြားအသေးစိတ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
မြောက်အမေရိက ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: FET ဘုတ်အဖွဲ့ ထုတ်လုပ်သူ
တောင်အမေရိက ဝန်ထမ်းများ၏အမှတ်: ~ 300 200
အနောက်ဥရောပ နှစ်ပတ်လည်အရောင်း: 15Million-20Million
အရှေ့ဥရောပ တစ်နှစ်တာတည်ထောင်: 2003
အရှေ့အာရှ ပို့ကုန် pc: 50% - 60%
Ningbo Fet အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ & Technology မှ Co. , Ltd ရှန်ဟိုင်း, Ningbo port မှ 50km ၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိ Ningbo စီးတီးအတွက် 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့4Automation ထုတ်လုပ်မှု lines.Our စက်ရုံအားဖြင့်တရုတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်း, ကယ်လစီယမ် silciate ဘုတ်အဖွဲ့ 20,000.000 စတုရန်းမီတာ၏နှစ်ပတ်လည်စွမ်းရည်နှင့်အတူ 600,000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်းဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကမြင့်မားတဲ့နည်းပညာအကြောင်းအရာရှိသည်နှင့်ပြည်နယ်သိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ novelty.The ထုတ်ကုန် Intertek, SGS, TUV, PSV တို့ကစမ်းသပ်ပါတယ်အဖြစ်, အသိအမှတ်ပြုကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းက ISO 9001 ကအတည်ပြုခဲ့သည်: 2008 နဲ့ ISO14001: 2001, အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ဖောက်သည်ထောက်ပံ့နေသည် , အရှေ့အလယ်ပိုင်း, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, ဒါကြောင့်အပေါ်ဥရောပ, တောင်အာရှနှင့်။
အဆိုပါအရေအတွက်ကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုထုတ်လုပ်မှု၏ 60% ယူတင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
Ningbo Fet အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ & Technology မှ Co. , Ltd ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးသူဝယ်လိုအားကျေနပ်အောင်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုစီးရီးထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းဖို့သန့်ရှင်း, "တီထွင်ဆန်းသစ်ကားမောင်း, ဦးဆောင်အရည်အသွေးကို" ၏အယူအဆနှင့်အတူ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူလုပ်ငန်း Win-Win ခွအေနကေို created နှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောင်မြင်ပါပြီ။
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်တွင်, အသုံးပြုသူထက်သာလွန်အရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုပျော်ရွှင် fun.With ပေးနိုငျသောထုတျကုနျဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအပေါ် FET အာရုံ, FET အမြဲတမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ပြင်၌ဦးဆောင်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
အစာရှောင်ခြင်း-ကြီးထွားလာနေချိန်မှာ FET လည်းကော်ပိုရိတ်လူမှုတာဝန်ယူမှုဂရုစိုကျ; ကျနော်တို့ကအမြဲပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အယူအဆသတိရပါ။
ကျနော်တို့အပြည့်အဝအထူးပြု, ထိရောက်, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနှင့်အမြင့်မား-စံချိန်စံညွှန်းမီဖြစ်စဉ်များ၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်ထူးခြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အယူအဆအနက်ကိုဘော်ပြသကဲ့သို့ TQC အကောင်အထည်ဖော်, ISO9001 နှင့် ISO14001 နှင့်အညီတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးနောက် FET လောကဓာတ်လုံးကိုတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွန်ရက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကိုခရိုင်မြို့များတွင်မိုးပြီ။ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှာတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဖောက်သည်အရှေ့တောင်အာရှ, ဥရောပ, အမေရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် pervade ။
ကျနော်တို့စျေးကွက်-oriented လိုက်နာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်စဉ်ကို reengineering မြှင့်တင်ရန်, သတင်းအချက်အလက်-based လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဗဟိုအဖြစ်ပေးသောဆည်းပူးနေဖောက်သည်များနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၏ကွန်ယက်ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုတညျဆောကျတည်ထောင်ရန်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "တန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်နှင့်လိုက်ဖက်စွာ-Win အနိုင်ရ" ဟုအဆိုပါလုပ်ငန်း၏ဝိညာဉ်ကိုရရှိထားသူ, တရုတ်လူမြိုး၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကြီးအမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးနှင့်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေးသွင်းတစ်ဦးအဖြစ်လျင်မြန်စွာကြီးထွားဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။
Ningbo Fet အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ & Technology မှ Co. , Ltd ", အရည်အသွေးဦးဆောင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကားမောင်း" ၏အယူအဆနှင့်အတူ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးသူဝယ်လိုအားကျေနပ်အောင်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုစီးရီးထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းဖို့သန့်ရှင်းလျက်, ထူးခြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး shaped ကြပါပြီ, ထို created ဖောက်သည်များနှင့်အတူလုပ်ငန်း win-win အခြေအနေနှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်။ ပျော်ရွှင်ပျော်စရာအသုံးပြုသူပေးနိုငျသောထုတျကုနျဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအပေါ်လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်နှစ်တွင်, FET အာရုံစိုက်။ တစ်ခုတည်းထုတ်ကုန် မှစ. မျိုးစုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်း development.With သာလွန်အရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုရန်, ကျနော်တို့အမြဲတမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ပြင်၌ဦးဆောင်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာရူပါရုံကိုအတူထူးခြားတဲ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဒီဇိုင်နာအသင်းရှိသည်, နှင့်ကွဲပြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဒီဇိုင်းစတိုင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးအားစနစ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, မှိုဖွံ့ဖြိုးရေး, ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကနေဆက်လက်တက်ရဖို့သေချာခဲ့သည်။
ကျနော်တို့မြင့်မားတဲ့အလိုအလျောက်အဆင့်နှင့်အများအပြားကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ4ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိသည်။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော fireproof, အလှဆင်, ခရမ်းလွန် coated အဖြစ်ထုတ်ကုန်အလင်းဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပစျေးကွက်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ရှိသည်ဟု mat.We diatomite ရေချိုးတဲ့အကွာအဝေးထုတ်လုပ်အတွက်အထူးပြု။
ကျနော်တို့ကောင်းသောအမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်နှင့်အတူ Frankfurt Paperworld တရားမျှတသောတက်ရောက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှဖောက်သည်ကြိုဆိုသည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ထို Canton တရားမျှတတဲ့တက်ရောက် FET ဘုတ်အဖွဲ့အရည်အသွေးမြင့်စာရေးကိရိယာထုတ်ကုန်တွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်နှုတ်ဆက်များနှင့်လည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်ယူသူတစ်ဦးကောင်းအမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်ပြသပါ။
Address: 189 # Longzhen လမ်း, Cixi စီးတီး, Ningbo, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်
ပြင်ပက Wall အရောင်အသွေးစုံသော Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ , ပြင်ပက Wall Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ , ပြင်ပက Wall Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ , ပြင်ပက Wall သည် Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ ,